“Abdiin keenya harka keenya jira; har’uma kaanee haa hojjannu!” – Oromedia
Home » Yaada » “Abdiin keenya harka keenya jira; har’uma kaanee haa hojjannu!”
“Jijjiiramichi yoo fashale, nu hundatu bada; yoo milkaa’e immoo nu maraaf tola.” Ob Leencoo Lataa.
Ob Leencoon dubbii kana marii kaleessaa irratti irra deebi’anii dubbatan. Dubbii kana yeroo hedduu duddubbatu.
Dubbichi waan lama of keessaa qaba: Baduu fi milkaa’uu. Kun immoo Sodaa fi Abdii baatee jira. Yoo jijjiramichi fashale, badiitu dhufa. Kun mala sodaachisanii ittiin nama oofanii dha. Dubbiin biraa “Jijjiramichi yoo milkaa’e, gaarummaatu dhufa” ka jedhu. Dubbiin kun abdii qaba; abdii uumees kan nama kakaasuu dha.
Dubbii kanaan duuba garuu waa hedduu jira. Warri dudubbatan kunis yaada gaarii kaasaa jiran. Dhugaatti, waanti akeekame milkaa’uun gaarii dha. Garuu, jijjiramichi akka milkaa’uuf maaltu hojjatamuu qaba? Eenyu maal hojjachuu qaba? Hojimaata barbaadamuuf dinagdee fi qabeenyi barbaachisu eessa irraa dhufa? Safartuun milkaa’inaa hoo maal? Gaaffileen akkanaa hedduu dha. Dhimmoota akkanaa waanti qajeelchu WALIIGALTEEN MUUMMEE tokko jiraachuu qaba. Amma namuu waanuma of harkaa qabu fi hubatu irraa dubbata. Silaa, waliigalteen hojiilee mara waaltessu jiraachuu qaba ture. Walgalteen Muummee hojiilee fi dubbilee mara waaltessuu tolfamuun barbaachisaa dha; san tolfatanii sanaan masakamuun, walhubannoo fida; waan milkaa’ee fi hin milkoofne beekuufis nama gargaara. Kun hatattamaan hojjatamuun barbaachisaa dha.
Akka aadaa jiruu fi jireenya dhala namaa irraa hubannutti, dubbachuu fi hojjachuun aadaa addaddaa ti. Warri dubbatan hedduun hin hojjatan; warri hojjatan yeroo hedduu hin dubbatan. Warri dubbatan rakkoo warri hojjatan argan hin argan; isaaniif kun rakkoo guddaa dha. Warri hojjatan rakkoo warri dubbatan argan, hin argan. Kan taa’ee ilaaluuf waanti hundi salphaa dha. Kun Qaawwa guddaa dha.
Amma akka argaa jirrutti, kan quba walitti qabu malee kan walgargaaru guddaa miti. Kun hir’ina guddaa dha. Dhugaan jiru warri hojajtu qaawwaa hojii jiru hin argu; kan qaawwaa hojii jiru argu isa ala irraa ilaaluu dha. Warri ala irraa dubbatu, qaawwaa warra keessaa hojjatuu argu. Kanaaf, warri dubbatu kun daawitii warra hojjatuu ti. Warri dubabtu kunis, rakkoo hojii keessa jiru hubachuu qabu. Callisanii, yaadaan guuluun hojii hin ta’u. Yaadni ka’umsa hojii ti. Garuu, yaadni hundi akka salphaatti hojii irra hin oolu. Dubbiin hundi yeroo itti seenana namaaf gala. Oromoon kanaaf, “GAHII ARGI” jedha. Karaa maraanuu walhubachuun barbaachisaa dha.
Akka Ob Leencoo jedhan, waliin baduu baannus, waliin guddachuun keenya milkana. Jijjiiramicha waliin milkeessuun barbaachisaa dha. Jijjiiramicha mikeessuuf waanti hojjtamuu qabus, qophaayee hojiitti seenamuun kan yeroon itti kennamuu miti. Aangoo ta’ee, qabeenya hojilee jijjiramicha milkeessuuf gargaaranis waliin qooddachuu fi fayyadamuunis haalduraa guddaa dha. Ofii waa mara ukkaamsanii qabanii, “yoo jijjiiramni fashale waliin badna” jechuun hin ta’u. Yeroo akkanaa dhugaa walitti himuun gaarii dha.
Amma waanti nu baasu, walgargaaruu dha. Hunduu waan beekuu fi hubatu qabantu jira. Kan dubbatus, kan hojjatus yoo walitti daballee ilaalle, faayidaa nuuf qaba. Warri hojjatu, yaada warra dubbatuu caqasuun gaarii dha. Warri dubbatu kunis muuxannoo warra hojjatuu hubachuun gaarii dha. Qoba qobaa eessayyuu hin geenyu; abdiin keenya harka keenya jira; har’uma kaanee waliin haa hojjannu; waliin guddanna; waliin gaaromna; waliin boonna; waliin jabaanna!
Previous: Seenaa Gabaabduu Ayyuub Abuubakar (1941-19670
Next: SEENAA HAYILAMAARIYAM GAMMADAA (1915 – 1970)